:: My Little World ::: New Blog (ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀)
Posted by Nay Nay Naing at 9/19/2008 12:10:00 PM
native ထဲမှာ မဖတ်မိဘူး။ အစ်မညွှန်းတော့မှ အဲဒီဘလော့ဂ် တစ်ထိုင်ထဲ အကုန်ပြီးအောင် ဖတ်ပစ်လိုက်တယ်။ တော်တော် အရေးအသားကောင်းတယ်နော်။ ဖတ်လို့လဲကောင်းတယ်။ အခုမှ လေးကောင်ဂျင်တွေ သုံးဆယ့်ခြောက်ကောင်တွေ အကြောင်းလည်း ကောင်းကောင်းနားလည်းသွားတယ် =)
Friday, September 19, 2008 5:04:00 PM
အလွန်စာရေးကောင်းတဲ့ နဗန လင့်အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။။။
Sunday, September 21, 2008 12:54:00 PM
မနေနေနိုင်ရေ။ အခုမှ ဖတ်မိတယ်။ ဆက်တိုက်မဖတ်ရ မနေနိုင်အောင် အရေးအသား ကောင်းတယ်နော်။ အခုလို ညွှန်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါပဲခ င်ဗျာ။
Monday, September 22, 2008 11:02:00 AM
ညွန်းထားတဲ့ ကိုနဗနရဲ့ ဘလော့ကို သွားဖတ်ကြည့်ဖြစ်ကြပြီး ၊ သဘောကျ နှစ်သက်တယ် ဆိုတာ သိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ စာဖတ်သူ တွေအဖို့ကိုယ်ဖတ်မိတဲ့၊ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့၊ ကိုယ်အရသာတွေတဲ့ စာပေတွေကို တခြားသူတွေကို ဖတ်ကြည့်စေချင်လို့ညွန်းကြ၊ ဖတ်ပြီး ကြိုက်တယ်ဆိုတာ သိရတဲ့အခါ ၀မ်းသာကြတာ သဘာဝပဲနဲ့ တူတယ်။ အားလုံးပဲ ဖတ်ပြီး နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကွန်မန့် တွေ ချန်ထားပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ။ :)
အခုမှ သတိရလို့ ကွန်မန့် ပြန်လာပေးတာ..မနေနေနိုင်လိုပဲ ကိုယ်ဖတ်တာလေးတွေသဘောကျရင် ပြန်ညွန်းချင်လို့ .www.myanmarfamily.org မှာ ဘ၀ဟူသည်ဆိုတဲ့ forum ခေါင်းစည်း အောက်မှာ ကျနော့်အတွေ့ အကြုံများ ဆိုတဲ့ တော့ပစ်နဲ့ကိုမိုးပေါင်ဆိုတဲ့ လူရေးထားတာတွေတော်တော်ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်.ကိုနဗန လောက်တော့ စာတွေမများသေးဘူးပေါ့...ဒါပေမယ့် ဗဟုသုတ ရစရာလေးတွေရှိပါတယ်..အချိန်အားရှိရင်သွားဖတ်ကြည့် စေချင်ပါတယ်..
Tuesday, September 30, 2008 9:31:00 PM
jurassic >> ကျွန်မ မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်နဲ့အဲဒီ တော့ပစ်ကို မသိခဲ့ဘူး။ ခုလို သတင်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဖိုရမ်ကို မန်ဘာဝင်ပြီး ညွန်းထားတဲ့တော့ပစ်လိုက်ရှာတာ ရှာမတွေ့ ဘူး... နည်းမျိုးစုံရှာကြည့်တယ်.. မရဖြစ်နေတယ်.. ဘ၀ဟူသည်ဆိုတဲ့ဖိုရမ်ကို တောင်ရှာမရ ဖြစ်နေတယ်.. ဖတ်ကြည့်ချင်လို့ကူညီပါအုံး. ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို လင့်အတိအကျလေး ညွန်းပေးစေချင်ပါတယ်.. ကျေးဇူးပါ..
Friday, October 03, 2008 11:32:00 AM
စောရီးပါဗျာ...ကျနော်လည်းအခုမှ သတိရလို့ပြန်လာကြည့်တာ..ဖတ်လို့ရမရ...ဖိုရမ်ထဲမှာ.ဆွေးနွေးကြမယ် ဆိုတဲ့ကွပ်ပျစ်ဝိုင်း..အဲဒီထဲမှာ ဘ၀ဟူသည် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် ရှိပါတယ်.အောက်ကလင့်ကို ၀င်ကြည့်ပါလား...ရမလားတော့ မသိဘူးးး
မရ ရင်ပြန်ပြောပါနော်...ကျနော်ကူရှာပေးပါ့ မယ်
Friday, October 03, 2008 11:48:00 PM
ပေးထားတဲ့ လင့်ကနေသွားလိုက်တာ.. ရသွားပြီး ...
နေလို့ မကောင်းတာနဲ့စာများများ မဖတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေလို့အစအဆုံး အကုန်လုံးတော့ မဖတ်ရသေးဘူး..
ဖတ်မိသလောက် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်.. အမြဲသွားဖတ်ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်...
:) take care ur health and be happy!
Monday, October 06, 2008 7:20:00 PM
mm.. luv this post..
Sunday, December 13, 2009 10:06:00 PM